Fantatro kosa fa hisy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra – FJKM Ambavahadimitafo Fantatro kosa fa hisy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra |
Fantatro kosa fa hisy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra
Publié le 28 septembre 2020 à 08:09
Ny teny nangalana ny hafatr’Andriamanitra dia ny Mpitoriteny 8 : 9 – 13 :
« 9Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin’ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra atao at? ambanin’ny masoandro. Misy andro anapahan’ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy. 10Ary tamin’izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ka tafiditra; fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin’ny fitoeran’ny masina ka nohadinoina tao an-tanàna; zava-poana koa izany.11Saingy tsy tanterahina vetivety ny famaliana ny ratsy atao, dia izany no ikirizan’ny fon’ny zanak’olombelona amin’ny fanaovan-dratsy. 12Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa hisy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra, dia izay matahotra eo anatrehany. 13Fa tsy hisy soa ho an’ny ratsy fanahy; fa ho toy ny aloka izy ka tsy haharitra ela, satria tsy matahotra eo anatrehan’Andriamanitra »
Manasa anao hiombona @ fanompoam-pivavahana alahady 27 septambra 2020 teto @ FJKM Ambavahadimitafo